Ole Dika Mpempe Mkpa Mkpa Na Nsogbu? - Mkpa mmanu | AromaEasy
Ole Dika Mpempe Mkpa Mkpa Na Nsogbu?
Ihe na April 26, 2020 July 6, 2021 by Matt
Etu Ole Na Mpempe mmanụ Dị Mkpa Ka M Kwesịrị Isi Tinye
Nke a bụ otu ole tụlee mmanụ dị mkpa iji tinye onye na-enye gị ihe dị iche iche:
Udiri Diffuser Ọnụ ọgụgụ nke Mbelata
Y’oburu na iji ogwu eji ogwu eme ihe, inwere ike mgbe ufodu gha gha gi ihu na mmanu di nkpa iji tinye ihe ndi ozo. Anyị agaghịkwa achọ ka isi na-esi ísì gabigara ókè karịrị anyị akarị, ma ọ bụ anyị achọghị ka ọ dị obere ikpuchi oghere anyị.
Dabere na nyocha nnwale sitere na ụlọ nyocha nke AromaEasy, anyị chọpụtara nguzozi zuru oke na mmanụ na mmiri dị mkpa. Guo ma soro ntuziaka a ka ị ga - esi kpoo mmanu gi na mmanu di nkpa.
Zere iji nnukwu mkpa mmanụ na diffuser - Gịnị mere o ji dị mkpa?
Enwere ụfọdụ ihe kpatara ịgaghị achọ itinye mmanụ dị oke mkpa na onye na-enye gị nsogbu. Nke mbu, isi ahu sitere na mmanu di nkpa nwere ike karie ike karie, kariri obere oghere. Nke abuo, mmanu ndi di nkpa n already enweta mmanu siri ike, ha nwere ike karie gi oke ma i tinye ihe riri nne na onye na-aru oru gi ma gbanye ya.
Igosiputa oke mmanu di nkpa, ka a gha ekwu, nwere ike ibute nsogbu ahuike diri ndi na-a themu ha. O nwekwara ike ịka njọ mgbe mmanụ ahụ dị mkpa ma ọ bụ nfụkasị ahụ.
Ihe nrịba ama a na-ahụkarị bụ:
Migraines ma ọ bụ isi ọwụwa
Okpo iku ume iku ume
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na Add Tinye Ọtụtụ Uduhie
Ozugbo ị gbanwere ihe mgbasa gị na, ọ gaghị ewe oge iji mara na ị tinyela ọtụtụ tụlee nke mmanụ dị mkpa. Mgbe ahụ ị nwere ike iche echiche ịhapụ ụlọ gị ruo mgbe oke ísì na-apụ n'anya ma na-ekesa ya. Mana ikwesighi ime nke ahụ - N'ezie, anyị nwere ike idozi ya n'ụzọ dị mfe.
Iji nyere aka wedata isi ahụ, anyị chọrọ ite. Nke mbu, kpoputa olulu ahụ n’ime ite ahu, wee jiri mmiri karie mmanu di nkpa. Tinyezie ngwakọta a gbanyere na mmiri. Ma chere obere oge tupu ị gbanye diffuser ma ọ bụrụ na isi ahụ ka siri ike.
Rịba ama na ọ dị obere karị mgbe anyị na-ekwu maka ọgwụ aromatherapy. Ewepụtara na osisi, niile mkpa mmanụ na-ewekarị oke ike, na-esi ísìsì dị ike. AromaEasy na-akwado ndị mbido ịmalite site na obere ego, wee rụzie ụzọ gị.
I nwekwara ike ịgbaso ụkpụrụ a mgbe ị na-ewebata isi ọhụrụ ọhụrụ gị. E kwuwerị, ebum n’uche anyị bụ inweta ọkụ na-esi ísì ụtọ ruo mgbe ebighị ebi kama ịbụ nke na-agwụ ike.
Imirikiti ihe ndị na-enye ultrasonic na-arụ ọrụ na 100mL mmiri. AromaEasy na-atụ aro itinye ihe dị n’agbata atọ na ise nke mmanụ dị mkpa maka 100mL mmiri ọ bụla.
Na mgbakwunye, ego ahụ ga-adabere nha nke onye na - achụpụ gị yana ebe ị hapụrụ ya ka ọ na - arụ ọrụ.
Inwere ike inye gị ihe dịgasị iche iche nha. Imirikiti n'ime ha, agbanyeghị na 100mL. Eziokwu a na - eme ka ọ dị mfe ịhazi oke mmanụ gị dị mkpa. Naanị bido na 3 tụlee dị ka ọnwụnwa wee rịa 20 ọdịda maka onye mgbasa oke.
Mara: Ntụziaka a anaghị ekwu maka iji mmanụ dị mkpa dị n'ụgbọala gị. Pịa iji chọpụta otu esi eji mmanu di nkpa.
Ugboro ole ka mmanụ dị mkpa na 1 oz?
A na-enweta 600 tụlee n'ime karama 1oz nke mmanụ dị mkpa. Na nchịkọta siri ike, ịnwere ike ịnweta 120-200 na karama 30mL nke mmanụ dị mkpa mgbe ị na-eji 100mL diffuser eme ihe.
Mara na mmanụ dị mkpa ruru iri abụọ n’ime milimita, anyị nwere ike ịchọpụta nsị nke mmanụ dị mkpa na karama ọ bụla, yana ole anyị nwere ike ị nweta.
Mpịakọta Ole Efu Ole Ojiji
30mL (1oz) 600 120-200
Mara: data dị na tebụl a na-ezo aka na mgbako maka 100m diffuser.
Ugbo ole ka mmanu mmanu di nkpa na 100mL Diffuser?
Dịka e kwuru, 100 mL mkpa mmanụ bụ ihe kachasịkarị n’ahịa. Na mkpokọta, ị ga - achọ n’etiti okpukpu 3-5 nke mmanụ dị mkpa maka onye na - enye onye na - eme ya ihe ruru 100mL. Ntuziaka ahụ bụ, ịmalite site na njedebe dị ala wee gbadaa ọdịda ise.
Nke a bụ ego ọkọlọtọ, dịka ịnwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ wepu mmanụ mgbe ịchọrọ. Dị ka ọmụmaatụ, ụfọdụ mmanụ dị mkpa na-esiwanye ike karịa ndị ọzọ, ị ga-egbutu ya ụfọdụ. E wezụga ike mmanụ ndị dị mkpa, ọnọdụ ahụ nwekwara ike bụrụ ihe kpatara - ndị mmadụ nwere ike iji obere mmanụ maka obere ụlọ.
Ndụmọdụ gbasara otu esi eji mmanụ mmanụ dị mkpa esi eme ihe
Ghichaa Ntinye Mmanụ Mkpa Gị
N'ezie anyị niile chọrọ idobe nke anyị mgbasa mmanụ dị mkpa na-arụ ọrụ na arụmọrụ kachasị elu. Iji hụ na nke a, ọ gha edobeghi ọcha. Nke a dị ezigbo mkpa ma ọ bụrụ na ị na-eji mmanụ dị iche iche dị mkpa. Ihe ndozi mmanụ nwere ike ịgbakọta ọnụ ma mesịa nwee isi na-atụghị anya ya.
Anyị ga na-atụ aro ihicha nhicha mmanụ gị dị mkpa mgbe ejiri ya. Ewezuga iwepu nsị mmanụ, nke a ga - enyere aka wepu nsị mmiri siri ike nke nwere ike belata arụ ọrụ nke onye na - ahụ maka gị.
Readinggụ Ọgụgụ - Ndụmọdụ ndị ọzọ na otu esi ehicha diffuser
Fgbanwe mmanụ gị dị mkpa n’oge
Ọtụtụ rookies na-agbasasị mmanụ ndị dị mkpa mgbe niile. Agbanyeghị, nke a anaghị enye aka maka onye mgbasa ma ọ bụ onwe gị. Gị limbic usoro ga acclimate ka mkpa mmanụ ọsọsọ ma ọ bụrụ na ị na-ahapụ a diffuser na-arụ ọrụ mgbe niile, na-akpata ole na ole uru ị na-enweta si aromatherapy.
Iji mee ka uru ị ga - enweta site na mmanụ dị mkpa, ịkesasasị ya na okirikiri ga - abụ ụzọ kachasị mma. Cyclekpụrụ kwesịrị ịrụ ọrụ bụ maka inye nkeji iri atọ tupu imechi ya nkeji iri atọ. Wetakwa ikuku gị ka ikuku iku ume.
Tụlee oghere ahụ
Ogo ime ụlọ gị bụ ihe ọzọ ị ga - elebara anya mgbe ị na - etinye mmanụ dị mkpa na ihe na - adịghị ala ala. Mkpokọta 3-5 dị mkpa nke mmanụ dị mkpa bụ ọkọlọtọ ụkpụrụ ọ bụla, mgbe ụfọdụ, anyị chọrọ karịa iji mee ka diffuser kpuchie nnukwu ohere.
Ihe ọzọ kwesiri ileba anya bụ ikuku nke ime ụlọ gị. May nwere ike iji obere mmanụ maka ime ụlọ ikuku ikuku dị ntakịrị. N’ezie anyị na-akwado ime ụlọ ikuku ikuku dị mma maka ịchebe onye na-ekposa ihe gị, n’ihi na ọ na - enyere aka igbochi isi ísì ụtọ ma jupụta gị.
Ogo nke Mmanụ Mkpa
Ọ dị mkpa ka ị zụta mmanụ gị dị mkpa n'aka ndị na-ebute gị ntụkwasị obi. Mmanụ ndị dị mkpa adịghị n'okpuru nlekọta nke FDA - dịka ị nwere ike ịma - ha anaghị elele ya maka ịdị irè ya ma ọ bụ nchekwa. Mmanụ ndị dị mkpa na àgwà na-adịghị mma na-eme ka ọ pụta ìhè. Nke a bụ ihe kpatara anyị ji zụta mmanụ dị ọcha, dị mkpa nke dị mkpa sitere na ndị na-eweta ya tụkwasịrị obi.
Ilstọ mmanụ dị Mkpa gburugburu anụ ụlọ
Ọ dị iche na nke ụmụ mmadụ, anụmanụ nwere mmetụta karị mmanụ. Lebe anụ ụlọ gị anya mgbe ị na-ewebata mmanụ ọhụrụ dị mkpa.1] Debe ọnụ ụlọ na-enweghị isi ka ha nwee ike ịlaghachi, ma kwụsị ịdị na mmanụ dị mkpa mgbe ha na-eme ihe dị iche.2]
6 mmanụ dị mkpa maka njikwa iwe
Otu echiche na “Ole Dika Mpempe Mkpa Mkpa Na Nsogbu?"
Bilie ekwu, sị:
Kedu maka onweghị onye na - enye mmiri mmiri, ị na - efesasị otu nzere ahụ na paịlị enyere.
May 17, 2020 na 11: 40 am